Ị nọ ebe a: Home / Archives maka Burkina Faso
Ịgbasi Ajuju Site n'inwe olulu na desert
Burkina Faso - Nyochaa ala akọrọ site n'igwu oghere n'ime ọzara na usoro usoro zaï. Ị jupụta na oghere ndị a na-emepụta ihe ndị dị na mbara igwe na voilà! Ọ dị ntakịrị karịa nke ahụ! M ga-ekwe ka ị chọta n'onwe gị. Daalụ Yacouba Sawadogo!
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Ngwọta Desertification Tagged With: 400 mm, 800 mm, Burkina Faso